Ukupheka okuzenzela | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Ukupheka okuzenzela
Ukusetshenziswa kwethisi le-iceberg: izinzuzo nokulimaza emzimbeni womuntu
Iyini ulethisi we-iceberg, namuhla, mhlawumbe, wonke umuntu uyazi. Lona uhlobo lwethisi elibukeka (ngisho nalapho ludliwa) lufana kakhulu nemifolishi emhlophe iklabishi. Amaqabunga ahlanzekile futhi aphuzi (isikhathi eside isaladi ibizwa ngokuthi "crisp"). Isetshenziselwa ikakhulukazi izisekelo zokulungiselela ama-salads, kanye ne-vitamin supplement kwezinye izinto zokudla okulula kanye nezitsha eziyinhloko.
Ukusetshenziswa kwejusi le-maple: izakhiwo eziwusizo nokuphikisana
I-saple yethu sap ayisithandwa kakhulu njenge-birch. Nokho, ngenani lezakhiwo eziwusizo, akayena ophansi kuye. Ezindaweni zaseNyakatho Melika, lokhu kuphuza kuyisizwe futhi kukhishwa ngezimboni. Kulesi sihloko sizobheka ukuthi yini eyenza i-maple sap, ukuthi iyasiza kanjani, ukuthi iqoqa kanjani ukumiswa kwe-maple nokuthi yini engenziwa ngayo.
Konke mayelana nezakhiwo ezizuzisayo neziyingozi zesitshalo seqanda
Isitshalo seqanda (lat. Solánum melongéna) sibhekisela ezitshalweni ezinomsoco ezinomphela we-genus Ukukhipha. Izwe lakubo yiNdiya, i-Asia, neMpumalanga Ephakathi. Endle, isithelo sinombala obomvu futhi sisakhula eNdiya, sitholakala eBurma. Isitshalo esifanayo esinezithelo ezincane seChina. Njengesiko lokudla esaziwa isikhathi eside.
Ubusi obuvela emahlathini ephayini buwusizo kanjani?
Ngenxa yezinto ezizuzayo ezikhishwe ehlathini lepine, ungasiza kakhulu umzimba ukuba ululame. Ukuphulukisa izinto kukhishwa ngokukhululekile entwasahlobo, kodwa akubona wonke umuntu okwazi ukuvakashela ehlathini ngalesi sikhathi. Kodwa namuhla kunethuba lokuthola inani eliphakeme lokuzuzisa ngisho nasekhaya, ngokusebenzisa nje uju kusuka ezigodini zikaphayini noma ama-pine amahlumela, okugcwele izinto eziningi eziwusizo ezihlukahlukene.
Ukulondolozwa kwamatononi emabhange ebusika
I-Watermelon ibhethri eyintandokazi enika ubumnandi nomswakama ehlobo. Icebile kakhulu kumavithamini, ama-microelements nezinye izinto eziwusizo kubantu. Kodwa yini okufanele uyenze uma ubusika bufikile, futhi ngaphandle kwalezi amajikijolo "nganoma iyiphi indlela"? Kulesi sihloko sizokutshela indlela yokulungisa kahle imvontshisi ekhethiwe emabhange ebusika, ukuze ziphephe futhi ziphilile.
Iresiphi ye-Plum Wine eyenziwe ngamakhemikhali
Ngokwesiko, sisetshenziselwa ukuphuza iwayini esenziwe ngamagilebhisi. Esibi kakhulu - kusuka ema-apula. Kodwa abahlakaniphile base-Asia bayazi ukuthi yi-plum enikeza ukuhlakanipha, impilo nokuphila isikhathi eside. Esihlokweni esichaza indlela yokwenza iwayini leplamu ekhaya usebenzisa iresiphi elula. Ukukhethwa nokulungiswa kwama-plums Qala ukulungiselela iwayini, okuyiqiniso, kuyadingeka ukulungiselela indaba yalo.
Silungiselela i-sweet cherry compote ebusika
Kuyinto ejabulisayo kusihlwa ebusika ebusika ukujabulela ukunambitheka kweberry oyikhonzile ehlobo. Ukuze wenze lokhu, udinga ukusebenza kancane ngesikhathi sokuvuthwa kwama cherry amnandi. Izitsha zekhishi nezitsha Ukuze uvale i-cherry compote ebusika, umsizi womswakama uzodinga ipuphu elincane lapho ungabilisa khona amanzi, ipanini enkulu yokugcoba imbiza, ukulondoloza okumbozayo, isembozo sepulasitiki nemigodi yokukhipha amanzi, izilinganiso kanye nekhasi.
Ijusi le-Sea buckthorn: yini equkethwe, ukuthi yini ewusizo, indlela yokwenza nokuthatha, kungakhathaliseki ukuthi kungenzeka ngesikhathi sokukhulelwa nokuncelisa
I-Sea buckthorn iyisiko esingavamile ngezithelo zamanzi ezinamanzi. Futhi amaqabunga, namajikijolo, nezimpande, futhi amagxolo anamandla okunciphisa izifo. Futhi ijusi le-sea buckthorn ijubane enempilo, elihlwabusayo nokuphulukisa. Yini equkethwe ekubunjweni Ukwakhiwa okuyinkimbinkimbi kwamajikijolo olwandle olune-sea buckthorn kuhlanganisa cishe onke amavithamini ajwayelekile, isethi esihle samaminerali, ama-acids aphilayo, ama-tanins, ama-antibiotic yemvelo, i-pectin, i-serotonin, i-flavonoids.
Indlela yokusebenzisa i-oak acorns yokwenza ikhofi
Abaningi bethu baqala usuku lwethu ngesimiso esifanayo: ukuphuza indebe yekhofi elimnandi ne-tonic. Kodwa, ngeshwa, akuwona wonke umuntu ongakwazi ukuyikhokhela ngenxa yezinkinga ezinegazi. Kuvela ukuthi kukhona okunye okuhle okunye okuphuzayo okuphuzayo - ikhofi e-acorn. Indlela yokupheka - lokhu kuzoxoxwa ngakho esihlokweni sethu.
Iyini ijusi legomegranate eliwusizo. Indlela yokukhetha ijusi elisha nezithelo ezifanele
Kusukela ezikhathini zasendulo, isintu siqaphela izindawo ezizuzisayo zegromegranate. Ngisho noHippocrates basebenzisa leli berry ukuze baphathe izifo ezihlukahlukene. Kuze kube manje, igromegranate ayizange ilahlekelwe ukuhambisana kwayo, kodwa, ngokuphambene nalokho, yande kakhulu, ngoba iqukethe izinto eziningi eziwusizo. Ukunakwa okukhethekile kunikezwa ijusi lalezi amajikijolo, esizoxoxa ngazo ngokuningiliziwe.
Indlela yokupheka isiraphu ye-maple, nokuthi iyasiza kanjani
Namuhla, isiraphu ye-maple izuze udumo njengomshukela wemvelo ushukela. Amabhodlela ane-sweet sweet brown azotholakala kunoma yikuphi ikhishi, abalandeli bokudla okunempilo nalabo abafuna ukuqeda amakhilogremu engeziwe. Kukholelwa ukuthi lo mkhiqizo onamathelayo unikeza umzimba izici ezibalulekile futhi kusiza ukuba uphile.
Iyini imbewu ewusizo ye-sunflower yabesifazane
Lezi zinhlobo zakudala ze-sunflower zinesikhala esingavamile futhi zibe nomthelela omuhle emzimbeni wesifazane. Inani lomkhiqizo linqunywa ukuba khona kwezinto ezisebenzayo ku-nuclei ne-germ. Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi kungani lokhu kudla kuyasiza kakhulu empilweni yowesifazane. Ukunambitheka Nezici Izitshalo zembewu ye-sunflower zihlwanyelwe imbewu yembewu yelanga yelanga, etholakala ebhasikisini elikhulu elihambisana nezikhala zombala ophuzi okhanyayo.
Izindlela zokupheka ezingcono kakhulu ezivela ku-feijoa
Endaweni yethu, i-feijoa i-exotus. Lesi sithelo esingavamile sifana nesi-kiwi, i-phaphayinaphu nakwezinga elithile le-strawberries. Kusetshenziswa kabanzi ekuphekeni, ukulungiselela izitsha ezihlukahlukene: iJam, ama-pastries, ama-saladi. Abaningi baye bazivumelanisa ukwenza i-feijoa tincture. Lesi siphuzo asikona nje iphunga elimnandi, kodwa futhi nezakhiwo eziwusizo.
Indlela yokupheka isaladi yase-Korean zucchini ebusika ekhaya
Wonke umuntu uyazi izaqathe zaseKorea - lesi sidlo siye sazuza isikhathi eside futhi sazuza ngokufanele. I-zucchini yaseKorea ayidluli kangako, nakuba le saladi egcinwe ingenawo ukunambitheka okungavamile. Ngezansi iresiphi yokulungiselela kwayo. Izimpawu zokudla Okunambitheka kwalesi isaladi, i-zucchini kanye ne-izaqathe ziqine, i-coriander igcizelela ukunambitheka kwe-flavour, no-anyanisi nama-pepper ashisayo akunika ubuciko kanye ne-piquancy.
Indlela yokulungisa i-tincture ye-plums kwi-vodka nokuthi iyasiza kanjani
Ikhambi elimangalisayo futhi isiphuzo esiphuzo esiphundu - i-plum tincture eyenziwe ngokwenza. Ikhefu elimnandi nelinamafutha linganciphisa ubusuku obusika obude, likhumbula ihlobo elishisayo. Futhi enye yezinzuzo zayo ukuthi akunzima ukwenza isiphuzo esinjalo. Yini ewusizo we-plum tincture Ungacabangi ukuthi i-tincture eyenziwe nge-vodka ne-plums-nje isiphuzo sokuphuza utshwala.
Indlela yokwenza i-tkemali ngesiGeorgia: iresiphi yesinyathelo ngesinyathelo
I-Tkemali iyi-sauce enomnandi neyomuncu yaseGeorgia ehamba kahle nezitsha zenyama. Mayelana nokulungiswa kwalo ngokusho kwe-recipe classic, kanye nokulungiselela ukudla okunomsoco okumnandi ebusika, sizochaza kulo mhlathi. Okudingayo ukuthatha ama-plums Ukulungisa isoso, uzodinga izinhlobo ze-tkemali (i-plum), ezibomvu noma eziphuzi.
5 zokupheka ezilula tincture of black-fruited (omnyama noma omnyama ash)
I-Chokeberry, i-chokeberry, i-ashberry ebomvu ibheji eliwusizo eliqukethe izinto ezibalulekile kubantu, ikakhulukazi amavithamini C no-P, ama-acid, ushukela, i-iodine. Ubhekwa njengombheki wezokwelapha. Ukuze ukwelashwa nokuvinjelwa kwezifo ezihlukahlukene, ukugcoba umzimba kuvame ukusetshenziswa. Sizokutshela ngezinzuzo zaleli berry tincture, iziphi izifo ezisetshenzisiwe nokuthi zingayilungisa kanjani - ngezansi.
Ukupheka kwe-cranberry liqueurs nge-moon
Esikhathini sekwindla nobusika, umzimba womuntu ngokuvamile uvame ukungabi namavithamini, ukuzivikela komzimba kunganciphisa, futhi umuntu uthola izifo ezihlukahlukene ezithathelwanayo nezivuthayo. Uma entwasahlobo nasehlobo kunethuba lokuqinisa umzimba ngosizo lwemithombo emisha yamavithamini, khona-ke ekwindla nasebusika sekwephuzile ungasebenzisa ngale njongo ukugcinwa kwemvelo kwemvelo - utshwala noma ukufana kwayo.
Izindlela zokupheka ezingcono kakhulu zokwenza ama-liqueurs kusuka eplamu, noma ukwenza kanjani i-pancake
Isiphuzo se-Plum - isiphuzo esimnandi nesiphunga elimnandi. Igama ngokwalo liqukethe okuthile okutholisa, okuthokozelayo futhi okunethezeka. Lokhu akusiyo isiphuzo esikhulu kuphela engxoxweni enhle, kodwa futhi nethuba lokumangaza izivakashi. Ngaphezu kwalokho, lo mdwebo umuthi omuhle kakhulu osiza ngezinkinga eziningi zezempilo.
Indlela yokupheka i-squash caviar ebusika ekhaya
Ebusika, imifino entsha iyanda kakhulu ngentengo, futhi isidingo somzimba sefiber nezinto ezinempilo asisuki. Ukugcinwa kwemvelo kuyasiza. Amabhange aqoqwe ehlobo nasekwindla zakuqala athathwa ngaphandle kwamagumbi, ama-mezzanines nama-cellars futhi afakwe etafuleni. Ngaphezu kwamakhukhamba wendabuko kanye noyotamatisi, kunengqondo ukulungiselela i-squash caviar.